Trump oo dhaqaalo Ethiopia ka heli jirtay USA ku wareejinaya dowladda Soomaaliya | Entertainment and News Site
Home » News » Trump oo dhaqaalo Ethiopia ka heli jirtay USA ku wareejinaya dowladda Soomaaliya
Trump oo dhaqaalo Ethiopia ka heli jirtay USA ku wareejinaya dowladda Soomaaliya
daajis.com:-Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay ka jari doonto dhaqaalo ay siin jirtay dowladda Ethiopia si ay ula dagaalanto ururka Al-shabaab.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Ethiopia inaysan muuqan awood cad oo Al-shabaab kaga imaaneyso maadaama dhaqaalo badan lagu siin jiray la dagaalanka Al-shabaab.
Donald Trump ayaa sidoo kale Muujiyay sida ay muhiim u tahay in laga taxadaro dhaqaalaha lagu bixinaayo Al-Shabaab, isagoona balan qaaday in taageero buuxda la siin doonto Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab.
Ethiopia oo dagaal adag kula jirto Alshabaab gudaha Soomaaliya ayaa dhaqaalo badan ka heli jirtay dowladda Mareykanka, iyada oo ku heleysa magaca la dagaalanka Al-shabaab.
Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in Meesha laga saaray lacag dhan $150,000 oo Doollar ah oo uu mareykanka bilkasta u ku siinjiray Itoobiya dagaalka Al-shabaab.
Madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay in lacagtaasi loo weecin doono dowladda Soomaaliya islamarkaana lagula dagaalami doono Alshabaab, sidoo kale wuxuu sheegay in lagu tayeyn doono ciidamada xooga dalka Soomaaliya.